Dr Robinson Jean-Louis : “Tsy fotoana hanitsiana lalàmpanorenana izao” | NewsMada
Dr Robinson Jean-Louis : “Tsy fotoana hanitsiana lalàmpanorenana izao”
Adihevitra hatrany ny amin’ny fanitsiana tsia ny lalàmpanorenana. Tsy fotoan’izany izao, raha ny fijerin’ny Dr Robinson Jean-Louis.
“Tratra aoriana loatra raha izao no hanova lalàmpanorenana. Tokony vao voafidy iny izy dia novana ny lalàmpanorenana, raha misy zavatra tsy mety”, hoy ny Dr Robinson Jean-Louis,
Efa somary tratra aoriana ny fanovana lalàmpanorenana. Nefa izany hoe tratra aoriana izany, efa mandeha ny fotoana, ny vaovao, ny toe-javatra… Mihatratra aoriana hatrany ny atao; avy eo, lasa manao zavatra tsy voatandrina.
“Ny fiheveranay azy: angamba, ny hahatsaratsara kokoa ny toerana mba hijanonana eo amin’ny fitondrana. Inona no dikan’izany?“, hoy ity kandidà nifaninana tamin’ny filoha tamin’ny fifidianana filohan’ny Repobika fihodinana faharoa ity.
Tsy ekeny na fanovana andininy iray amin’ny lalàmpanorenana aza. Raha vao voafidy eo, ohatra, ny mpitondra amin’ny fifidianana manaraka eo, amin’izany no hatao ny fanovana.
Tsy maintsy hatao ihany ny fanitsiana lalàmpanorenana
Araka izany, toy ny ankamaroan’ny fanehoan-kevitra manohitra ny fanitsiana ny lalàmpanorenana amin’izao: na ahoana na ahoana, tsy azo ihodivirana ny fanovana ny lalàmpanorenana aorian’ny fifidianana: fanorenana ifotony.
Raha tsy izany, famboamboarana vitsivitsy sy maimaika no hitranga: tombontsoa manokana ho an’ny mpitondra tokoa? Mitohy ny adihevitra, saingy be no ho vitsy ny mpanohana ny fitondrana: na mpanao politika io, na firaisamonina sivily, na sendikà; eny, na ny avy amin’ny sehatra iraisam-pirenena aza. Hanao ahoana?